Senatarkii ugu horreeyay ee Baarlamaanka 11aad ee Federaalka Soomaaliya oo Kismaayo lagu doortay | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Senatarkii ugu horreeyay ee Baarlamaanka 11aad ee Federaalka Soomaaliya oo Kismaayo lagu...
Senatarkii ugu horreeyay ee Baarlamaanka 11aad ee Federaalka Soomaaliya oo Kismaayo lagu doortay
Waxaa Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubbada Hoose Saaka si toos ah uga billaabatay dooranaya Kuraasta Aqalka sare ee Senetarada kasoo galaya Maamulka Jubbaland, waxaana ku tartamay musharxuiinta u taagan in ay Aqalka sare kasoo galaan degaanada Jubbaland.
ka hor inta aysan bilaaban doorashadu ayaa Ammaanka guud si weyn loo adkeeyay, iaydoo gudaha Magaalada iyo goobta lagu qabanayo doorashada lagu arkayay Ciidamo kala duwan oo sugaya Amniga guud ee magaalada Kismaayo.
Afarta kursi ee yaalla Jubbaland ayaa waxaa Kursi ka mid ah ku guuleystay Ilyaas Badal Gaboose ayaa noqday Senatarkii u horreeyay ee loo doortay Kursiga Aqalka sare Baarlamaanka 11aad ee Federaalka Soomaaliya.
Ilyaas Gaboose ayaa helay 55 cod, halka Musharaxa la tartamayay Maxamed Axmed Sayid uu helay 17 cod, kaddib doorasho ka dhacday Kismaayo oo Xildhibaannada Dowlad Goboleedka Jubbaland doorteen, waxaana wali harsan Seddex kursi oo saacadaha soo aaddan lagu dhawaaqi doono Musharixiinta kusoo baxa.
Maamulka Jubbaland ayaa noqonaya Maamulkii ugu horreeyay ee doorashadu ay ilaa iyo hadda si toos ah uga billaabatay, waxaana ilaa iyo hadda la sugaya Maamulada kale, si ay u billaabaan doorashada Xubnaha Aqalka sare, oo hor dhac u ah doorashada guud ee dalka ka bilaabatay.
Maqaal horeDoorashada Aqalka sare oo kismaayo ka billaabatay iyo ammaanka oo la adkeeyay
Maqaal XigaSarkaal kale oo loo xiray dilkii loo geystay Madaxweynihii dalka Haiti